बाबुराम भट्टराई « Image Khabar
काठमाडौं, पुष ७ । सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद अवरुद्ध पारिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)लाई सरकारले दण्डित गर्न मात्रै बाँकि
एमसीसीमा सहमति गरौं, गठबन्धन नतोडौं : डा. भट्टराई
समाजवादी प्रेस संगठनले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले एमसीसीमा सहमति गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले एमसीसीकै कारण गठबन्धन नटुटाउनका पनि शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
दाहाल र भट्टराईले संविधान संशोधनको नाममा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्दै छन् : पौडेल
जनकपुर । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधनको नाममा गठबन्धन भित्रैका केही दलले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । आज जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पुष्पकमल
लोकतन्त्रमा न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्नु अनिष्ट– डा.भट्टराई
अध्यक्ष भट्टराईले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सबै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै भागबण्डामा चल्ने कामले न्यायालयको प्रतिष्ठामा आघात पुगेको तर्क गर्नुभयो ।
राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रका पक्षमा पूर्वराजाले दिएको सन्देशमा बाबुराम भट्टराईले जनाए आपत्ति
काठमाडौं, असोज २६ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुपचाप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेर बस्न सुझाव दिनुभएको छ । पूर्वराजा शाहले मंगलबार दिएको दशैंको
‘खड्गप्रसादको कुम्भमेला निभ्ने बेलाको बत्ती हो’ अध्यक्ष भट्टराईकाे टिप्पणी
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले खड्गप्रसादको कुम्भमेला निभ्ने बेलाको बत्ती भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । भट्टराईले टुइटमार्फत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको फोटो
एमसीसीले देशमा सामाजिक र आर्थिक विकास हुन्छ : बाबुराम भट्टराई
सिन्धुली, भदौ २९ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसी कार्यक्रम लागु गर्दा देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताउनु भएको छ ।